Ny lasa sy ny ho avin'i Busan amin'ny maha-Tanàndehibe Iraisam-pirenena ny Fivoriambe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny lasa sy ny ho avin'i Busan amin'ny maha-Tanàndehibe Iraisam-pirenena ny Fivoriambe
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanintona sy nampiantrano fivoriambe iraisam-pirenena tsy tambo isaina, Busan dia nitombo ho iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra amin'ny fivoriambe iraisam-pirenena. Laharana faha-4 ao Azia ary faha-12 manerantany, araka ny laharan'ny Union of International Associations an'ny tanàna fivoriambe iraisam-pirenena, dia mbola nanohy nanangana ny toerany ho tanàna lehibe (fihaonana, famporisihana, fivoriambe ary fampirantiana) i Busan. Ny antso tsy manam-paharoa amin'ny tontolo voajanaharin'i Busan, fotodrafitrasa fivoriamben'ny kilasy ambony ary indostrian'ny fizahan-tany dia afangaro amin'ny loko marketing MICE ao an-tanàna, miaraka amin'ny valiny mahomby sy tsy miova. Busan dia toerana mety amin'ny fivoriambe iraisam-pirenena. Andao hizaha ireo zava-bitany sy ireo mety hitranga amin'ny ho avy.
Fiandohana ho toy ny tanànan'ny fivoriambe iraisam-pirenena
Nurimaru APEC House (Source: Busan Tourism Organization)
Tamin'ny fanokafana ny Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO) tamin'ny taona 2001, ahitana efitrano fampiratiana mihoatra ny 46,500 and sy efitrano fivoriana 53, Busan dia nahomby tamin'ny indostrian'ny fivoriambe iraisam-pirenena. Ny fahombiazan'ny APEC Korea atsimo 2005 natao tany Busan dia nahatonga ny tanàna hanana ny toeran'ny tanàna fivoriambe iraisam-pirenena lehibe any Azia. Tamin'io taona io ihany dia natsangana ny Birao Fifanarahana Busan hanamafisana ny ezaka MICE ao an-tanàna. Ny fivoriambe iraisam-pirenena marobe nalaza natao tany Busan izay nahatonga azy io ho hitan'ny olona eran'izao tontolo izao amin'ny maha tanàna idealin'ny MICE dia misy ny Forum Iraisam-pirenena OECD 2009 sy ny Fifanarahana Iraisam-pirenena 2012 an'ny Lions Clubs.
Mitombo isa hatrany amin'ny maha-tanàna MICE anao
Fihaonana an-tampon'ny commemorative ASEAN-ROK 2019 (Source: Cheongwadae)
Tamin'ny volana novambra 2019, Busan dia nampiantrano ny fihaonana an-tampon'ny ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit fanindroany nanomboka ny taona 2014. Nanatrika ny hetsika ny mpanatrika 10,000, anisan'izany ny filoham-panjakana, ny minisitra governemanta ary ny solontenan'ny orinasa avy amin'ny firenena ao amin'ny faritra ASEAN. izay nanaovana fampindram-bola tany amin'ny faritra maro. Niorina ny toeran'ny Busan ho ivon'ny fifanakalozana ASEAN rehefa nampiantrano ny Vovonana Mekong-Repoblikan'i Korea 1st ihany koa izy, izay nifampitohy tamin'ny fihaonambem-pahatsiarovana ny ASEAN-ROK 2019. Tamin'ny volana Desambra tamin'io taona io ihany, ny Kongresin'ny federasiona diabeta iraisam-pirenena 2019 dia notontosaina tamim-pahombiazana ihany koa tao Busan, toerana nahitana tranga tsy fahita firy izay nahitana mpitsidika hetsika 3,000 nihazakazaka namaky ny tanàna tao anaty hazakazaka tamin'ny alina natao mba hampiroboroboana ny firaisankina.
Fiakarana amin'ireo fanamby ataon'ny mahazatra vaovao
Fetiben'ny Busan One Asia (Source: Busan Tourism Organization)
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nifikitra hatrany tamin'ny paikadin'i Korea COVID-19 i Busan ary mampiantrano hetsika azo antoka mandritra ny areti-mandringana. Hetsika lehibe iraisampirenena kasaina amin'ity taona ity dia misy hetsika manamarika toy ny Festival Busan One Asia amin'ny volana Oktobra, ary ny Kaongresy manerantany manerantany momba ny Biosensors faha-30 amin'ny volana Novambra. Manoloana ny areti-mifindra coronavirus, hetsika marobe tsy misy ifandraisany azo tanterahina noho ny teknolojia fihaonana no mitranga, ary ireo indostria MICE ao Busan dia miara-miasa amin'ny famahana ny krizy. Ny fiarovana an'i Busan eo afovoan'ny areti-mandringana dia voaporofo amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny International Safe Community Network, zava-bita tsara satria i Busan no tanàna voalohany metropolitan eto an-tany nahazo fankatoavana.
Fiomanana amin'ny rafitra amin'ireo fivoriambe lehibe indrindra manerantany
2026 federasiona iraisam-pirenena ho an'ny Kongresy fanaraha-maso mandeha ho azy (Source: Busan Tourism Organization)
Ny hoavin'i Busan amin'ny maha-tanàna misy ny fivoriambe iraisam-pirenena dia mazava. Niezaka mafy izy mba hahazoany tombony amin'ny hetsika iraisam-pirenena marobe toy ny fiadiana ny tompondaka tenisy ambony latabatra eran-tany 2021, ny Kongresin'ny mikraoba iraisam-pirenena 2022, ary ny federasiona federasiona iraisam-pirenena ho an'ny fifehezana mandeha ho azy 2026, Busan dia manomana ireo hetsika ireo ho toy ny tanàna mpampiantrano voamarina. Ity zava-bita ity dia tsy nitranga tampoka; nitaky ezaka lehibe avy amin'ny tanàna hanatsarana hatrany ny antso avo amin'ny maha-tanàna fandraisam-bahiny azy. Noho ny fotodrafitrasa MICE efa mandroso, izay ahitàna fisafidianana ivon-toeran'ny fivoriambe, hotely, toerana tsy manam-paharoa ary rafitra fanohana, Vonona i Busan ho lasa tanàna fivoriambe iraisam-pirenena avo indrindra.
Tsy manam-petra ny fahafaha-mitombo an'i Busan amin'ny maha-tanàna fivoriambe iraisam-pirenena azy. Araka ny asehon'ny zava-bitany, ny tanàna dia manamarina ireo boaty mety rehetra: ny filàna, ny fahaiza-manao ary ny fotodrafitrasa ilaina mba hanomezana traikefa tsara indrindra ny fivoriambe iraisam-pirenena. Hiezaka hatrany i Busan hisarika sy handraisana fihaonambe iraisam-pirenena amin'ny vanim-potoana miovaova, ho lasa tanàna fivoriambe iraisam-pirenena malaza sy malaza.